Avereno jerena sy naoty ao amin'ny Fiderana ny faharetan'ny Carl Honoré - Ikkaro
firosoana >> boky >> Fiderana noho ny faharetan'ny Carl Honoré
Tsy tiako ilay boky ary tsy amporisihiko izy io. Manomboka matanjaka aho. Mampalahelo fa io no namaky voalohany ny taona. Ary izany dia mitranga amiko fa tsy manomboka ny famakiana taona Ny mahasoa ny tsy misy ilana azy, fomba fanao 2 taona izay tsy avelako ho resy.
Mikasika ny bokin'i Honoré dia heveriko fa mihoatra ny antsasaky ny pejy tavela io. Niady hevitra aho raha hanoratra an'ity famerenana ity na tsia, saingy satria misy foana ny zavatra tsara dia avelako hosoratako izy ireo raha sendra manaraka dia te-hijery lohahevitra iray nahasarika ny saiko aho. Enga anie ity bilaogy ity ho fahatsiarovako.
Fiderana noho ny faharetana. Hetsika iray manerantany no mihantsy ny fivavahana hafainganam-pandeha
Efa nolazaiko izany, ho toy ny boky Hitako fa miverimberina io. Be dia be. Mieritreritra aho fa nahavita ela loatra izy satria averimberiny hatrany ny fanaporofoan-kevitra mitovy isaky ny toko sy mandritra ny boky. Eny, mametraka ohatra samihafa fa mifototra amin'ny mitovy hatrany.
Manomboka mamitaka ilay boky. Ny rehetra amin'ny lafiny lehibe kokoa na ambany dia maika. Ny fisokafana dia toa fanambarana, misy adihevitra antonony. Tsy mila manova fiovana mahery vaika ianao mba hiadana, fa miadana fotsiny amin'ny hetsika sasany, sns.
Ary ity dia zavatra ekeko fa hahasoa antsika rehetra.
Fa manomboka eto dia averimberiny in'arivony manodidina ny tontolo samihafa isam-boky nozaraina izy.
Vatana sy saina
Ireo dia lojika rehetra, izay angamba tsy nijanona nieritreritra momba azy akory, fa izay ifanarahanay rehetra.
Raha te hanana lahatsoratra mahafinaritra ianao dia jereo Ny fanararaotan'ny serasera navoakan'i Ignacio Ramonet. Somary antitra, nefa manome aingam-panahy.
Ny ratsy indrindra amin'ny boky iray manontolo
Azo antoka fa mitranga ao amin'ny faritra fitsaboana izany Ny fitsaboana hafa dia ampirisihina ho safidy amin'ny fitsaboana. Ary teo no vaky ny boky, satria ny fahitako ny fomba nanoratany an'ity olana ity dia nahatonga ahy tsy hatoky ny zavatra rehetra lazainy.
Na inona na inona miverimberina na miverimberina dia tsy haiko intsony hoe aiza ny mpanao ody ary aiza ny zava-misy voaporofo. Ka tsy nahaliana ahy intsony izany.
Fanamarihana sy antontan-taratasy hodinihina
Ny sasany amin'ireo lohahevitra resahany miaraka amin'ny ohatra dia:
Mba hamaranana dia avelako ity antontan-taratasy ity izay a taratasy avy amin'i Harry Lewis ho an'ny mpianany Harvard. Mitondra ny lohateny hoe Miadana: mivoaka bebe kokoa amin'ny Harvard amin'ny fanaovana kely kokoa.
Tsy mbola namaky aho fa nahaliana ahy ilay izy. Raha vantany vao mamaky azy aho dia miverina ary manavao ny fidirana. Raha te hamaky azy ianao dia azonao sintonina avy Tranonkala Harvard na avy any Ikkaro
Taratasy fanalefahana Harry Lewis an'i Harvardmarary mitsika
Raha namaky ny bokin'i Lewis na ny taratasiny ianao dia mametraha hevitra ary lazao ahy ny hevitrao.
1 Fiderana noho ny faharetana. Hetsika iray manerantany no mihantsy ny fivavahana hafainganam-pandeha
2 Ny ratsy indrindra amin'ny boky iray manontolo
3 Fanamarihana sy antontan-taratasy hodinihina